Tamin’ny sabotsy maraina kosa no nanatanteraka ny asa tagnamarony andiany fahefatra ny teo anivon’ny polisim-pirenena. Araka ny nambaran’ny minisitry ny filaminam-bahoaka, CGP Roger Rafanomezantsoa, nosafidiana manokana ny kaomisarian’ny boriborintany faha-5 amin’izao ankatoky ny fetim-pirenena izao hoentina hanatsarana ny endriny izay manakaiky an’i Mahamasina hanaovana matso ny 26 jona izao. Voaloko ny atiny sy ivelany. Araka ny fampitam-baovaon’ny miaramila kosa, hiavaka ny asa tagnamaro hotanterahana anio amin’ny fanadiovana ny kianjan’i Betongolo. Toerana izay handraisana ny kermesin’ny foloalindahy Malagasy amin’ity taona ity izay hotanterahina ny zoma 21-26 jona izao ho fanamarihana ny faha-59 taonan’ny fahaleovantenam-pirenena Malagasy sy ny fetin’ny foloalindahy. Maro amin’ireo fotodrafitrasa, ny tranom-panjakana, indrindra ny toeram-pivoahana no efa goaka sy valaka tanteraka. Tsy vitan’ny asa tagnamaro ireny fa mila vola nefa tsy mbola hita taratra anaty tetibolam-pandaniana amin’ity taona ity. Haja Nirina